Instagram dia miaraka amina endrika vaovao roa: Color and Fade | Androidsis
Instagram manampy safidy roa vaovao ho an'ny Android: Color and Fade
Instagram dia iray hafa amin'ireo rindranasa na serivisy efa tafiditra tanteraka tamin'ny fiainantsika niomerika mampakatra ny sary raisinay isan'andro mba ho hitan'ny namantsika na izay mampiasa an'ity sehatra ity amin'ny fakàna sary. Toy ny fampiharana malaza hafa isaky ny fotoana kely manavao ny fampiharana azy ireo amin'ny vaovao izy ireo tahaka ny mitranga amin'ity kinova Instagram vaovao ity.
Kinova vaovao amin'ny Instagram izay mitondra fitaovana vaovao roa hanolorana sary avo lenta izay azontsika avy amin'ny solomaso fakantsary an'ny finday malalantsika. Ireto zava-baovao roa ireto dia fitaovana roa amin'ny fanitsiana: Color and Fade. Araka ny Instagram ihany, ity fanavaozana ity dia azo atao ao anatin'ny fitaovana fanitsiana izay ahafahanao mihodina ireo sary. Ary raha fintinina, ireo zava-baovao roa ireo dia tonga nanolotra ireo sary fijery somary matotra kokoa.
Loko sy Malazo
Miaraka amin'ny loko azonao atao ny misafidy feo valo hanovana ny hazavana sy ny faritra maizina amin'ny sary, raha mamela anao handefa sary miaraka amina loko marefo kokoa i Fade, izay mety ho endrika mahazatra kokoa noho izay hitantsika matetika amin'ny sivana Instagram malaza.
Endri-javatra roa vaovao izay nanatevin-daharana ny vondrona zava-baovao tonga amin'ny fanavaozana farany avy amin'ny sivana vaovao dimy izay nitondra fomba ankehitriny kokoa amin'ny sary nalaina tao amin'ny Instagram. Ny zava-baovao iray hafa dia ny fahaizana "manafina" ny sasany amin'ireo sivana izay tsy hampiasaintsika mihitsy mba hananana ireo izay tiantsika indrindra fa tsy handany fotoana hisafidianana azy ireo.
Ary ny antsipiriany madinidinika ao amin'ity fanavaozana vaovao ity dia ny mety hisoratra anarana amin'ny fidirana amin'ny fifandraisana sasany. Tsindrio ny bokotra «…» eo amin'ny mombamomba ny namanao iray mba hampavitrika ilay safidy «ampandehanana ny fampandrenesana ny famoahana». Ity dia hahafahanao mahatsapa ny tsirairay amin'ireo fidirana izay alefan'ny fifandraisana avy hatrany.
Fanavaozana izany Azo alaina ao amin'ny Play Store izao mba hitsapana ireo vaovao mahaliana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Instagram manampy safidy roa vaovao ho an'ny Android: Color and Fade
Avereno jerena ny Moto G 4G
HTC One M9 Plus dia nambara tamin'ny fampisehoana QuadHD 5,2 ", Duo Camera ary Fingerprint Sensor